Mpanamboatra sy mpamatsy sary TEXTURED China | Aotian
Anaran'ny entana:taratasy misy sary miloko
Size:A4 (210 * 297mm)
Weight:260g / m² 300g / m²
Style:Fece iray ary tarehy roa
Tohano ny ranomainty:Ranomainty loko sy ranomainty loko
Mpanonta mety:Epson, mpanonta jet jet canon miloko
Ampiharo amin'ny:Sary fampakaram-bady, sary fanamarinana, sary zavakanto, karatra anarana
Ny taratasy fanontana jet-jet dia ny vatan'ny ranomainty avy amin'ny nosakan'ny mpanonta jet-jet izay misy ny sary na ny soratra soratany. Ny toetra mampiavaka azy dia ny fanakihana ranomainty haingana sy ny tsy fanaparitahana ranomainty. Fepetra manokana:
1. firaketana tsara, hery mitroka ranomainty matanjaka, hafainganam-pandehan'ny fifindran'ny ranomainty, savaivony mitete kely ranomainty, endrika manodidina ny manodidina;
2. hafainganam-pandeha haingana, izany hoe, matevina avo, feo mitohy, sary mazava;
3. fiarovana tsara, ny efijery dia misy fanoherana rano, fanoherana ny hazavana, any anaty na any ivelany dia misy fitehirizana sy haingam-pandeha; (4) ny coating dia manana tanjaka sy tanjaka azo antoka, tsy mora ny manarona, tsy misy herinaratra mijanona, azo antoka haavon'ny slip, miondrika, mivelatra.
Araka ny mampiavaka azy, ny taratasy fanontana jet-jet dia azo zaraina ho:
1.Casting coating: micron-grade silicon dioxide dingana, famirapiratana sy ny fotsy dia mety hahatratra ny haavon'ny taratasy nentim-paharazana, fa ny fototra taratasy dia taratasy fototra;
2.Expansion: ny fitaovana polyene (PVA) dia ampiasaina matetika hananganana pataloha miendrika Peng Run amin'ny taratasy fototra;
3. Teknolojia micropore: taratasy mifono RC izay mampiasa dingam-pandehan'ny silika dioxide, ny fananganana fanontam-pirintin'ny vongan-tsolika voajanahary sy organika, avy hatrany dia mitovitovy amin'ny fanamafisam-peo micropore cellular antsoina hoe micropore paper.
Ity taratasy ity dia azo ampiasaina hanamboarana karatra KARTSA. Ny vidiny dia somary ambany ary ny vidiny dia tsy avo tahaka ny PVC. Izy io dia azo ampiasaina ho toy ny karatra orinasa tsy misy andriamby na karatra taratasy vita tanana ho an'ny ankizy. Ny taratasy dia mafy orina sy matevina ary tsy mora simba. Misy loko maro azo isafidianana
Previous: PAPER PHOTO CRYSTAL
Manaraka: PAPERA GOLDEN SY SLIVER
Taratasy misy sary miloko
T-Shirt Taratasy, Taratasy fametahana sary mamirapiratra, Taratasin'ny sary mainty, Fanontana taratasy ho an'ny sary, Taratasy vy ho an'ny akanjo, Taratasy famindrana mangarahara,